Bayanda abesifazane abenza imikhiqizo yokunakekela izinwele zemvelo zabantu abamnyama kanti ukuvalwa kwezwe kuvulele, kwandisela abanye amathuba. UNOKWANDA NCWANE uyabika | Umbele
Loku kuholele ekutheni bagcine bezithakele imikhiqizo yabo enakekela izinwele nesikhumba somuntu ompisholo, nokwabenza bakhula bagcina ngokuqala inkampani ethaka izinhlobonhlobo zale mikhiqizo.
UNksz uPhumelele Khumalo noNksz uNosihle Dlamini, baseThekwini nabangabanikazi beGet2Natural, bathi ukungasebenzi kahle kwemikhiqizo ababeyisebenzisa kwabenza babona ukuthi izinwele zihlukene ngezindlela eziningi.
“Okwenza ibhizinisi lethu lihluke kunamanye wukuthi sinikeza abesifazane imikhiqizo eqondene nohlobo lonwele ngalunye. Siphinde sihlinzeke nangemikhiqizo ehambisana nezinhlobo (zamafutha emvelo) avela ezitshalweni ukuze ikhuthaze ukukhula kwezinwele namandla azo,” kuchaza uNksz uDlamini.
UNksz uNosihle Dlamini noNksz uPhumelele Khumalo abanikazi beGet2Natural
UNksz uZandile Gumede uthi iCOVID-19, ehaqe umhlaba wonke kulo nyaka nebiwundabizekwayo, ayifikanga nokubi kuphela njengoba eqale ibhizinisi lokudayisa imikhiqizo yezinwele ngesikhathi somgonqo.
Umkhiqizo wakhe obizwa ngeZandisa, onezithako zemvelo, unakekela ukhulise izinwele zabantu abamnyama nalezo ezithanjisiwe ngemithi yesilungu.
UNksz uZandile Gumede umnikazi womkhiqizo wezinwele iZandisa
“Isikhathi esiningi abantu bebebuza ukuthi sisebenzisa yiphi imikhiqizo, bacele amasu nezindlela zokunakekela izinwele zabo. Ngesikhathi (somgonqo) sibe sesibona ukuthi abantu bayaludinga lolu lwazi kwazise bebengakwazi ukuvakashela izindawo zokucwala izinwele.
“Ngemuva kokubona ukuthi abantu abaningi basebenzisa isikhathi sabo ezinkundleni zokuxhumana ne-internet, sibe sesibona ithuba lokuqala ibhizinisi sisebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuze sidayise imikhiqizo nokuxhumana namakhasimende,” kusho uNksz uGumede.
Njengawo wonke amabhizinisi, izinqinamba zihlale zikhona. Okuhlalukayo ukuthi iningi lo somabhiznisi elikulo mkhakha wezinwele likuthola kunzima ukudayisa imikhiqizo ngaphandle kosizo lwezinkampani zezimonyo.
“Ukuhlola imikhiqizo ukuze ibe sezingeni lokulungela ukungena ezitolo kumba eqolo, kwazise isitolo ngasinye sinemibandela kanye nokulindelekile emikhiqizweni okuhlukile kunesinye,” kuchaza uNksz uDlamini.
Ngokwe-Statista Report yango-2016, imboni yokunakekela izinwele emhlabeni jikelele yayilinganiselwa 1.1 trillion, okwenza ukuthi ngo-2020 cishe ingaphezu kwaloko. Imboni yezinwele eNingizimu Afrika igaya uR9.7 billion ngonyaka.
I-Euro Monitor International, inkampani ecwaninga imakethe, ngokocwaningo lwango-2019, ilinganise ukuthi imboni izokhula ngephesenti ngo-2020 sekubhekwa nomphumela wesankahlu seCOVID-19.
Omakhonya kule mboni yiL’Oreal Paris, i-Estee Lauder, iProcter & Gamble njll.
Lezi zintokazi zikholwa wukuthi ukungazigqaji ngezinwele zemvelo ebantwini abamnyama yikona okuvule intuba yokucwaswa ngezinwele zabo.
NgoSepthemba kulo nyaka, isitolo sezimonyo iClicks sibe sematheni ngesikhangiso semikhiqizo yakwaTresemmé esasinobandlululo futhi sibukela phansi izinwele zabantu abamnyama njengoba sasizichaza njengeziphukile nezomile.
Lesi sikhangiso siqubule umsindo ezinkundleni zokuxhumana nasezweni lonke njengoba ngisho noMengameli uCyril Ramaphosa asigxeka enkulumweni ayethula ukugubha uSuku lwamaGugu kanti, kwaze kwaqhamuka neziqubulo ezithi #ClicksMustFall nesithi #ShutDownClicks.
“Angikholelwa ekutheni umuntu kumele azinyeze ngendlela uNkulunkulu adale ngayo izinwele zakhe. Uma sizigqaja ngezinwele zethu zemvelo, sitshengisa labo abasakhula ukubaluleka kokuzamukela ubunjalo bazo nokungazenyezi ngezinye zezinto ezenza bahluke kwabanye,” uNksz uDlamini.
Uthe ukholwa wukuthi lesi sikhangiso sivule abantu abaningi amehlo ngendlela ababuka ngayo izinwele zabantu abamnyama. “Iseyinde indlela okumele siyihambe ukuze samukeleke nezinwele zethu. Uma ubheka izikhangiso (kwithelevishini) kanjalo nasemabhukwini, akuvamile ukuvela (abamnyama) nezinwele zabo; ziyaye zifihlwe bese kugqama lezi ezixhunywayo nezokufakelwa.
“Imidlalo (yethelevishini) nezinkundla zokuxhumana (kunomphumela) omkhulu ekutheni abantu abamnyama bangazigqaji ngezinwele zabo. Isikhathi esiningi abantu intsha ebukela kubona kwezokungcebeleka nasezinkundleni zokuxhumana bahlale benezinwele zokufakelwa, kuthi uma ngabe beveze ezemvelo bathi ‘bad hair day’. Konke loku kunikeza abasakhula isithombe sokuthi ngezokufakelwa izinwele ezemukelekile futhi ezikwenza ube muhle.” kuphetha uNksz uGumede.